Ndị na-emepụta ọkọlọtọ ihe omume Drone - China Drone Omume Ọkọlọtọ Suppliers & Factory
Ọnụ ụzọ mgbanaka ime ụlọ, imewe mmapụta, ọnụ ụzọ ịgba ọsọ drone dị fechaa na nke nwere Loopholes gburugburu ọnụ ụzọ ámá nke nwere ike ikwe ka warara ọkụ gafere, ntọala nhọrọ ndị ọzọ dị, na-ewetakwu ụtọ maka ịgba ọsọ.
Ọnụ ụzọ ime ụlọ D bụ ọnụ ụzọ ịgba ọsọ FPV emere maka asọmpi ịgba ọsọ drone, ojiji ya na ọnụ ụzọ mgbanaka ime ụlọ mana ọdịdị dị iche. Ihe dị mma na ọkachamara, anya mechara. Na otutu arịọnụ nhọrọ, ọ dị mfe iwu a dịgasị iche iche nke ọmụmụ.
Mgbanaka mgbanaka ime ụlọ bụ ọnụ ụzọ na-efe efe Micro FPV maka Tiny Whoop Inductrix na Micro Racing Drones, ojiji ya na ọnụ ụzọ mgbanaka ime ụlọ na ọnụ ụzọ D ime ụlọ mana ọdịdị dị iche. Ihe dị mma na ọkachamara, anya mechara. Na otutu arịọnụ nhọrọ, ọ dị mfe iwu a dịgasị iche iche nke ọmụmụ.
Ọnụ ụzọ ámá dị n'èzí, bụ otu ụdị Quadcopter Racing Gates na-ewu ewu nke ị na-achọghị ka ị tufuo, emebere ya maka ịgba ọsọ drone. Ihe dị mma na ọkachamara, anya mechara. ọnụ ụzọ mgbanaka ikuku FPV dị elu.
Ọkọlọtọ a bụ nke polyester warp kpara akwa ma sie ike nke ọma maka ojiji n'èzí n'ọtụtụ ihu igwe.
Ọnụ ụzọ ámá nke dị n'èzí bụ ọnụ ụzọ ikuku kachasị ewu ewu nke na-enyere gị aka ịmepụta usoro ịgba ọsọ FPV siri ike ngwa ngwa na ngwa ngwa, nhọrọ zuru oke maka ndị na-ahazi FPV Race, klọb na ọbụna maka ndị chọrọ ịnwale ma melite nkà FPV ha.
A na-ejikwa ya maka nkwalite mmemme ma ọ bụ ngosi mmemme, dịka ọmụmaatụ, ahịrị mmalite ma ọ bụ mechie maka mmemme klọb na-atọ ụtọ.
Enwere ike ịhazi eserese, akwa nylon siri ike siri ike maka ime ime/èzí.
Ihe omume square ọnụ ụzọ ámá, dị ka mmalite ọnụ ụzọ na imecha ọnụ ụzọ maka Fpv drone ọduọ, nwekwara ike iji n'ọtụtụ dị iche iche ọnọdụ dị ka emume ụlọ ahịa imeghe, ememme promo, ọbụna dị ka mmalite ma ọ bụ mechaa ahịrị maka egwuregwu klọb. Enwere ike ịhazi eserese, akwa nylon siri ike siri ike maka ime ime/èzí.
Ọtụtụ ihe omume ịgba ọsọ FPV dị ugbu a na-eji ọkọlọtọ akara yana DIY FPV ọnụ ụzọ ịgba ọsọ, Ezubere maka ndị na-agba ọsọ FPV, a na-ahụ ha nke ukwuu ma na-adịgide adịgide na ikuku ma na-enye ntụaka ọhụụ mara mma na mpaghara FPV Track / Course mpaghara .. ọnụ ụzọ ámá ndị a sitere na prop ákwà na-eguzogide ọgwụ . Ejiri osisi fiberglass dị arọ na-adịgide adịgide rụọ ya. Ọkọlọtọ niile dị mfe ịtọlite ​​​​na ọtụtụ ntọala ị nwere ike ịhọrọ iji na ala dị nro ma ọ bụ nke siri ike.